ab Raj Roshyara ले फेरी किन दोहोर्याउने ? - प्रवासी नेपाली
HomeNewsab Raj Roshyara ले फेरी किन दोहोर्याउने ?
ab Raj Roshyara ले फेरी किन दोहोर्याउने ?
Nab Raj Roshyara ले फेरी किन दोहोर्याउने ?
आदरणिय जर्मनबासी नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु,
हामीले एनआरएनए जर्मनीको अद्यक्ष पदमा किन दोहोर्याउने ? केही साथीहरुको यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ ।
हामीले दोहर्याउन चाहनुका मुख्य कारणहरु:
1. बिगतमा भएको एनआरएनएको संगठनात्मक अवस्था लथालिङ भएकोले काम गर्न नसक्ने अवस्था थियो । अहिले ६ वटै एलसीसीलाई सकृय पारेर काम गर्ने बातावरण तयार पारीएको तर आफुले सोचेका योजनाहरु लागु गर्न समय पर्याप्त नभएकोले ति योजना लागु गर्न हामीले दोहर्याउन चाहेका हौ।
2. बिगतको कार्यकालमा शुरु गरेका केही अपूर्ण कामहरु पूरा गर्न र एनआरएनए लाई संगठनात्मक रुपमा अझ ब्यबस्थित पार्ने जस्तो: ( सदस्यताको डाटा ब्यन्किङ सिस्टम, औन्लाइन भोटिङ सिस्टमको अध्ययन र सम्भव भए लागु गर्न, संस्था लाई सार्वजनिक (इ फाउ) बनाउने हरेक एलसीसी को आ-अफ्नै ब्यान्क खाता, वेबसाइटको उन्नती, एनआरएन कार्ड सबैमा पुर्याउने र बारकोड सिस्टम लागु गर्ने, एनआरएन कार्ड बाट बिभिन्न ठाउमा (एयरलाइन्स, सुपरमार्केट, नेपालीहरुको रेस्टुरेन्टमा) डिस्काउन्टको ब्यबस्थाको लागि पहल गर्ने )
माथिका बुदाहरुको बिस्त्रित व्याख्या :
हाम्रो टिम एनआरएनएमा निर्वाचित हुँदा खेरी एनआरएनएमा भएको लामो समय देखीको राजनीतिकरणले जताततै लथालिङ भएको अवस्था थियो। केही एलसीसीहरु मात्र सकृय थिए । सानो केही काम शुरु गर्दा पनी पुर्वाग्रहका राखेर बिरोध गरिहाल्ने पारीपाटी थियो । यती सम्मकी छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा झगडा भएर हात हालाहाल हुने स्थिती सम्म उत्पन्न हुन्थ्यो । राजनैतीक र समुहगत फाइदाका लागि पद लिने तर काम नगर्ने प्रब्रितीले जरा गाडेको थियो । अहिले पनि जर्मनी बाहिर बसाइ सर्न पूर्ण तयारी गरी सकेर लामो समय जर्मनी बाहिर समय बिताएका ब्यक्तीत्वहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत र समुहगत प्रतिष्ठाको लागि एनआरएनएको अद्यक्ष पदमा उम्मेद्बारी दिएको अबस्था छ। निश्चित रुपमा उहा हरु पनि हाम्रो समाजको अभिन्न अङग हो , उहाहरुलाई हामीले सम्मान साथ समाजमा अग्र स्थान दिनु पर्छ। तर आफ्नो ब्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि सामाजिक पद लिएर हामीले समाजमा अबरोध सिर्जना गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ।
एउटा ब्यक्तीले पद लिए पछी बीचमा हटाउन पनि नमिल्ने, सम्मेलन मार्फत अर्को ब्यक्ती आउनको लागि अर्को २ बर्ष कुर्नु पर्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ब्यक्तीले सिर्जनशिल काम गरौ भन्दा सहमती जुट्नै नसक्ने अवस्था थियो। यसै कारण धेरै जसो समाज सेवीहरु र समाजको लागि केही गरौ भन्ने मित्रहरु मुख्य भूमिका बाट पलायन भएका थिए । कतिपय साथीहरुले हामीलाई निकै उदार र आफ्नो पावर प्रयोग गर्न नसक्ने पनि भने । तर झै झगडा र अन्तर्बिरोधले भरिएको समाजमा सह्रिदयी र मित्रताको भावना कायम गर्ने हो र सबैले सम्मानित भएको समाजको सिर्जना गर्ने हो भने कुनै पनि किसीमको बल देखाएर हुँदैन्थ्यो। त्यस्तो किसमको बल ले क्षणिक सोलुसन त दिन्थ्यो होला तर दिर्घकालिन समाधान दिदैन्थ्यो। जर्मनीमा बस्ने नेपालीहरुको आर्थिक स्थिती बलियो होस भनेर कलेक्टिव इन्वेस्ट्मेन्टको अबधारणा अघी सार्यौ। एक बर्ष सम्मा निरन्तर जर्मनी का हेरक शहरमा छलफल र अन्तर्कृया गर्यौ । नितान्त नयाँ अभ्यास भएकोले पनि होला हामी केन्द्रिक्रित प्रोजेक्ट बनाउन सफल भएनौ ।
हाम्रो प्रयास र अहिलेको अवस्था:
संगठनात्मक क्षेत्रको सुधारका लागि बिगत चार बर्ष देखी हामीले सबै सँगको सहकार्यमा हामी बीचको तिक्तता, सामाजमा भएको राजनीतिकरण र आपसी असमजदारी अन्त गर्ने र हरेक एलसीसीलाई पुन: संस्थागत गर्दै सकृय पार्ने काममा हामी निरन्तर लागि पर्यौ । बिगतमा सामाजिक अभियान बाट पाखा लागेका ब्यक्तित्वहरुलाई यो एनआरएनएको प्ल्याटफर्ममा आएर सहज रुपमा काम गर्ने बातावरण बनायौ । यस्को उदाहरण यहाँहरुले प्रतक्ष देखी रहनु भएको छ। सदस्यतालाई ब्यबस्थित गर्न डाटाकार्डको ब्यबस्था गर्यौ । एनआरएनएको नयाँ वेबसाइटको शुरुवात गरेका छौ। यसरी संगठन लाई ब्यबस्थित गर्न सहयोग गर्नुहुने सबै अग्रजहरुप्रती हामी सदैब आभारी छौ। चाडपर्वहरु मनाउनको लागि हामीले चुनेका इवेन्ट कोर्डिनेटरलाई बिना कुनै अबरोध २ बर्ष सम्म जर्मनीको सबै ठाउँमा निर्वाध रुपमा काम गर्ने र बिभिन्न सान्स्क्रितीक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने वातावरण बनायौ। यस्का लागि हामी इवेन्ट कोर्डिनेटर लगायत उहाको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ।
हाम्रै कार्यकालमा युरोप स्तरिय क्षत्रीय भेला जर्मनीमा सफलता पुर्वक सम्पन्न गरी संसारभर बाट आएका नेपाली पाहुनाहरुलाई खुशी पारेर पठायियो र जर्मनबासी नेपालीहरुको सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्यौ । नेपालमा बेला बेलामा बिपत परेका बेला सहयोग गर्ने काम हामीले निरन्तर जारी राख्यौ । मेडिसिन क्षेत्रमा महिलाहरुको आङ खस्ने उपचार मा सहयोग, स्वश्थ रहन सेनिटेसन अभियानको शुरुवात, नाकाबन्दीको बिरोध, आदी इत्यादी ।
आउदो दुई बर्ष हाम्रो नेत्रित्व नै किन ?:
छोटकरीमा लेख्दा हामीले संगठनात्मक हिसाबले प्रगती गरेर ६ वटै एलसीसी हरुलाई पूर्ण रुपमा सकृय रहन सक्ने ब्यबस्था त गर्यौ तर हाम्रा योजनाहरु एलसीसी मार्फत लागु गरेर सामुहिक नेत्रित्वको आधारमा काम गर्नको लागि समय पर्याप्त नै भएन । अबको २ बर्षमा यहाँहरुले हामीलाई अबसर दिनु भयो भने हामीले यो समाज र एनअारएनलाई सामुहिक नेत्रित्वको माद्यम बाट अझ सुद्रिढ र परीपक्कव बनाउने प्रतिबद्द्ता जाहेर गर्न चाहन्छौ। अहिले सम्म एनआरएनए जर्मनीमा सकृय साथीहरु एक्ला एक्लै खटी रहेको स्थिती थियो भने अब आएर सामुहिक रुपमा केही गरेर देखाउनको लागि बाटो बनेको छ। यसैले पनि सामुहिक योजनाको नेत्रित्व गर्ने अबसर हामीलाई दिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।
स-सना लगानिकर्ताहरु समिटेर सामुहिक लगानीको अबधारणा अहिले पनि एनआरएनहरुका लागि महत्वको बिषय हो। हिजोको दिनमा यो बिषयमा निकै छलफल भयो तर मुर्त रुप पाउन सकेन । अबको कार्यकालमा हामीले ठोस कार्य गरेर देखाउने प्रतिबद्द्ता जाहेर गर्दछौ। बिभिन्न चाड पर्वहरु, सान्स्कृतिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनको लागि कलाकारसाथी हरुलाई स-सम्मान काम गर्ने बाताबरण बनाउने प्रतिबद्द्ता हामी ब्यक्त गर्न चाहन्छौ।
साथै खेलकुद (फुटबल कप, भलिवल कप) विद्यार्थी औ-पेयर सँगको सहकार्य, बिभिन्न संघ सन्स्थाहरु सँगको सहकार्यलाई अघी बढाउने,
समग्रमा लेख्दा अर्को २ बर्षमा जर्मनीको हाम्रो नेपाली समाजलाई समुन्नत र प्रतिष्ठित बनाउने हाम्रो सामुहिक अभियान लाई यहाँहरुले साथ दिनु हुने छ। भन्ने विश्वाश लिएका छौ।
घुसखोरीको आरोपमा धेरै प्राविधिक कर्मचारी पक्राउ पर्नुको कारण
सुचना सहित हार्दिक अनुरोध आदरणिय जर्मनी निवासी गैर आवासिय नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु नमस्कार ।